Ny Koreana Avaratra Air Koryo dia nanambara ny famerenan'ny sidina sinoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Koreana Avaratra Air Koryo dia nanambara ny famerenan'ny sidina sinoa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tsy nisy sidina niainga avy tany Pyongyang ho any Beijing na dia nisy aza ny fanambarana
Nanidy ny seranan-tsambo fidirana an-tanety na an-dranomasina na an-habakabaka i Korea Avaratra tamin'ny Janoary 2020
Korea Avaratra dia mampiseho "marika mihabe" amin'ny fanalefahana ny famerana ny sisintany miaraka amin'i Shina
Talohan'izay dia namoaka ny fandaharam-potoanan'ny sidina tany amin'ny tanànan'ny seranan-tsambo Rosiana Vladivostok ny Air Koryo
An'i Korea Avaratra Air Koryo dia toa kasaina hanohy hiasa sidina roa eo anelanelan'ny Pyongyang sy Beijing amin'ity herinandro ity, aseho ny tranonkalan'ny kaompaniam-pitaterana anio. Mbola tsy tena mazava tsara hoe rahoviana ary rahoviana no hiverina indray ny serivisy aorian'ny fampiatoana herintaona mahery ao anatin'ny famerana ny sisin-tany COVID-19.
Ny fandaharam-sidina napetraka tao amin'ny tranonkalan'ny mpitatitra saina nasionaly Koreana Avaratra, ny sidina JS251 an'ny zotram-piaramanidina dia hiala ao Pyongyang amin'ny 4:00 hariva ary tonga any Beijing amin'ny 5:50 hariva ny alakamisy. Ny sidina iray hafa dia kasaina hiainga avy any Beijing mankany Pyongyang amin'ny zoma.
Tamin'ny 4 ora sy sasany hariva anefa, tsy nisy sidina niainga avy tany Pyongyang, raha ny filazan'ny mpanara-maso sidina tena izy. Ny sasany nanombatombana fa mety nanandrana ny tranonkalany ny zotram-piaramanidina ho fiomanana hanohy ny sidina mankany Sina.
Tany am-piandohan'ity andro ity dia nilaza tamin'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny minisiteran'ny fampitambarana fa i Korea Avaratra dia mampiseho “fiakarana marobe” amin'ny fanalefahana ny famerana ny sisintany miaraka amin'i Shina.
Nanidy ny seranan-tsambo hidina an-tanety na an-dranomasina na an-habakabaka i Korea Avaratra tamin'ny Janoary 2020 ho fanakanana ny virus coronavirus tsy hiparitaka ao amin'ny firenena.
Talohan'izay dia namoaka ny fandaharam-potoanan'ny sidina tany amin'ny tanànan'ny seranan-tsambo rosiana Vladivostok ny Air Koryo, saingy tsy nampandeha ny sidina tao koa izy.
Korea Avaratra dia mbola tsy nitatitra tranga voan'ny virus virus COVID-19, saingy niantso ny ezaka natao mba tsy ho vaky ilay viriosy amin'ny taniny amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny sisintany mihamafy sy ny fanamafisana ny fizotry ny quarantine.